~ ဏီလင်းညို ~: ပြေးလမ်းပေါ်က လေးနှစ်သား ကျွန်တော်...
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 6:24 AM
အသက်လိမ်ထားတဲ့ လေးနှစ်သားလေးရဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရပို့စ်လေးကို ဦးဦးဖျားဖျား မန့်သွားပြီး Myanmar Blogs Digest Fan Page လေးအတွက်ပါ မသွားပါကြောင်းးးးး...
စာရေးကောင်းပြီးဖော်ရွေခင်မင်စရာကောင်းတဲ့ဏီလင်းညိုရေ... Happy Blogger's Dayပါနော်....
လေးနှစ်သားလေး စကားတတ်တယ်နော်... :D
ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ပြောသွားလိုက်တာ လူစုံတယ်
အကယ်ဒမီရရင် အငှားပြောခိုင်းရမယ်...တကယ် တကယ် :P
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ကိုဏီ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေးးပို့စ်လေးကို ဖတ်ခဲ့ပါကြောင်း :))
ကိုဏီ ပျောက်နေတာကြာပေါ့.FB မှာများ စာတွေ တင်နေလားဆိုပြီး အပြေးအလွှားရှာဖတ်ဖြစ်သေးတယ်.
ဒီနှစ် ဘလော့ဒေးမှာ ဘလော့တော်တော်များများ ပို့(စ်) လေးတွေ တင်ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးဖြစ်သွားတာတော့ နှစ်သက်သဘောကျမိတာအမှန်.
HAPPY BLOG DAY ပါ ကိုဏီရေ
နောက်ဆို ခဏခဏ မပျောက်နဲ့တော့နော်အကို ...:) ပျော်ရွင်စရာ ဘလော့ဒေးပါလို့....
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုဏီးကိုတွေ့ရင် စိတ်ပူဖို့ပဲ သိတယ်.. ကိုဏီး နောက်တင်တဲ့ စာတွေကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ပိုင်း စကားနည်းလာ.. (သိသိသာသာကို စကားနည်းလာတဲ့) ကျွန်တော့် ကြောင့် ဘာမှ မချိန်ခဲ့မိတာပါ.. ကိုဏီးရေးထားသလို ကိုဏီး လူချစ်လုခင်ပေါတာလည်း အားကျတယ်.. အဲဒါကတော့ ကိုဏီးရဲ့ စိတ်ရင်းနဲ့ အရှိအရှိအတိုင်း ဆက်ဆံတတ်တဲ့ နှလုံးသားကြောင့်ပါ.. ကိုဏီးကို လေးလည်းလေးစားတယ်.. ခင်လည်းခင်တယ်.. ကျန်းမာရေးကြောင့် တစ်ခုခု ကြိတ်ခံစားပြီး.. တစ်ခုခု နာကျင်ခံစားနေရမှာလည်း စိတ်ပူတယ်..
Happy Blog Day ပါ ကိုဏီလင်းး)
ဒီရက်ပိုင်း များပြားလှတဲ့ ဘလော့ဂ်ဒေး ပို့စ်တွေ ကြားထဲမှာ ခေါင်းကို ဘယ်ဖက်လှည့်ရမှန်းတောင် မသိနိုင်ခဲ့တာမို့ အခုမှပဲ ရောက်ဖြစ်တော့တယ် ကိုဏီရေ...၊း)
လေးနှစ်သားဆိုတာ အတော်တောင် ကြီးပြီလို့ ပြောရမှာပါပဲ၊ မူကြိုတက်လို့ ရပြီ၊ လေယာဉ်စီးရင် အလကား မရတော့ဘူး၊ ဘလော့ဂ်ရွာရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ခြေချင်းလိမ်အောင် ပြေးလို့ရနေပြီ...၊းD စာရေးကောင်းတဲ့ ကိုဏီရဲ့ အမှတ်တရပို့စ်လေးကို အခုလို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်လည်း ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်...၊
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘလော့ဂ်ဒေးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားနဲ့အတူ ရှေ့လာမယ့် နေ့များစွာမှာလည်း ရုပ်ခန္ဓာရော၊ စိတ်ဝိညာဉ်ပါ ကျန်းမာစွာနဲ့ စာတွေအများကြီး ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
ကိုဏီကြီး အဆင်ပြေတာ ပျော်ရွှင်တာကိုကြား ရတော့ဝမ်းသာပါတယ် ဗျာား)
ကျုပ်တို့ကတော့ အားတိုင်းရောက်နေမှာပဲဗျို့း)
ကိုဏီ ရေးသော ဘလော့ဒေးနေ့အကြောင်းလေးဖတ်သွားပါတယ်။ အနုပညာနှင့်ပတ်သက်၍ စာရေးကောင်းသော ၊ အသံကောင်းသော (အဆိုတော်လုပ်ရင်လဲ နာမည်ကြီးမှာ) ကိုဏီကိုအမြဲခင်မင်လျက်ပါ။ လက်နာနေပါတယ်ဆိုမှ ရေးပြီးကွန်မန့်ပျောက်သွားလို့ ပြန်ရိုက်ရပါသည်။ ဘလော့ဒေးနေ့ဆိုတာ ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိလို့ ဘလော့ဒေးနေ့အကြောင်း ရေးနေသူများ အားလုံးရဲ့စာကို လိုက်ပြီး ငေးမောနေမိပါသည်။
ဘလော့ဒေးပို့စ်ကို အားရပါးရ ဖတ်သွားပါကြောင်းးးးးး
လေးနှစ်သား မှ စပြီး နှစ်တွေ အများကြီး၊ အများကြီး ပြေးလမ်းပေါ် ဆက်ပြီး ပြေးနိုင်ပါစေ နော်။
လေးနှစ်သားလေးက ကျန်းမာရေးချူချာတော့ နေကောင်းရဲ့လားနဲ့ပဲ အရင် နှုတ်ဆက်နေရတယ်..။ နူးညံ့သိမ်မွေ့အရေးအသားနဲ့ လူနဲ့လိုက်ပါတယ် ဏီဏီရေ...။ အားလုံးပါဝင်အောင်ရေးသြွးတာကို ဖတ်ရတာနဲ့တင် ဘလော့ကို ဘယ်လောက်တွယ်တာသူဆိုတာ သိနိုင်တယ်။
စကားမစပ် - နေကောင်းအောင်နေဦး.. :D
စာအသစ်တွေထပ်တင်ပါဗျို့ ဒါပဲပြောချင်တယ်း))